ထင်မြင်ချက်: လူသေသည့်နေ့ - ဘာကြောင့်လူငယ်များလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကျရှုံးမှုဖြစ်ရသနည်း - Brain On Porn
ထင်မြင်ချက်: လူတို့သညျအသေခံနေ့ - အဘယ်ကြောင့်လူပျိုတို့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာပျက်ကွက်နေကြပါတယ်
အများဆုံးအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများရှိလူတို့သညျတစ်ဦးမဟုတ်ဘဲအခွင့်ထူးခံဘဝအသက်ရှင်နေထိုင်ကြောင်းအများအပြားပြောဆိုချက်ကိုသော်လည်း, lthere လူပျိုတို့နထေိုငျသောဘဝအရည်အသွေးအတွက်ကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားသည်ယနေ့သူတို့၏ဘိုးသို့မဟုတ်အဘိုးနဲ့တူမဟုတျပါ: သူတို့ကအမျိုးသမီးတွေန်းကျင်ကိုပိုပြီးလူမှုရေးအရအဆင်မပြေခြင်းနှင့်ရှက်တတ်ဖြစ်ကြသည်တစ်ဦးနုပျိုအသက်အရွယ်မှာပိုပြီး porn လောင်, ကျောင်းအတွက်မိမိတို့၏အမျိုးသမီး counterparts တွေကိုနောက်ကွယ်ကကျဆင်းလျက်ရှိကြောင်းနှင့်၎င်းတို့၏မိဘများနှင့်ကျောင်းများအနေဖြင့်သာမဖြစ်စလောက်လိင်ပညာရေးကိုလက်ခံရရှိထားပါသည်။
ယောက်ျားနည်းနည်းဖြည့်ညှင်းနှင့်အတူလူမှုရေးမီဒီယာနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း၏မရေမတွက်နိုင်သောနာရီလောင်, သူတို့သည်သူတို့ရှေ့မှာမဆိုမျိုးဆက်သစ်ထက်လျော့နည်းတက်ကြွစွာနှင့်ပိုပြီးအဝလွန်ဖြစ်ကြသည်။ လူတို့, ပညာသင်နှစ်ရင်ခုန်စရာ, ဒါမှမဟုတ်အလုပ်-ဆက်စပ်အောင်မြင်မှုနှင့်အများအပြားနောက်ခံလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်လျော့နည်းစိတ်ဝင်စားဖြစ်လာနေကြတယ်, လူယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေးပြဿနာများသည်အလင်းမှလာမယ့်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားကိစ္စရပ်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ် - ရှိရာသို့အလျင်အမြန်ပိုကောင်း။
ဖိလိပ္ပုသည် Zimbardo, သူ့စာအုပ်ထဲတွင် "လူကြားဖြတ်" သူတို့ကကျနော်တို့ရဲ့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာကြီးပြင်းအဖြစ်လက်ရှိထိခိုက်နှစ်တစ်ထောင်နှင့်လူငယ်ယောက်ျားလေးများရင်ဆိုင်ရဖော်ပြထားပါတယ်။ အဆိုပါ arousal သက်သက်သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါဘူးပေမယ့်သူ့အလုပ် "arousal စွဲ" ဟုအထူးဖော်ပြသည်။ လုလင်တို့သည်သူတို့ကို, လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အမှား overcompensate သို့မဟုတ်လျစ်လျူရှုရန်ဖြစ်စေတဲ့, ယခင်အစဉ်အဆက်ထက်ကြီးပြင်းခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, America မှာကွာရှင်း၏တိုးပွားလာမှုနှုန်းတစိတ်တပိုင်းမိဘအုပ်ထိန်းသို့မဟုတ်မိမိတို့၏ဘိုးဘေးတို့နှင့်ဝေးလံသောစိတ်ခံစားမှုဆက်ဆံရေးနှင့်အတူများစွာကိုယောက်ျားလေးများထွက်ခွာမည်။ ဤသည်ကိုတိုက်ရိုက်သက်ငယ်ပြစ်မှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတိုးလာနှုန်းထားများမှတရားမျှတမှုစာရင်းအင်းအမေရိကန်ဗျူရိုနှင့်မှန်ကန်သော၏တက္ကဆက်ဦးစီးဌာနတို့ကနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ လူငယ်တစ်ဦးသည်လူရဲ့အသက်တာ၌လမ်းညွှန်မှု၏ဤကနဦးမရှိခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးဝပျက်ပြယ်အထီးအခန်းကဏ္ဍမော်ဒယ်တစ်ဦးကလေးဘဝဖန်တီးနိုင်ပြီး, အဖြစ်ကောင်းစွာအနာဂတ်ဆက်ဆံရေးထိခိုက်နိုင်ပါသည်, မိမိကိုမိမိနှင့်အခြားသူများမှအနာဂတ်စိတ်ခံစားမှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိုငွေပြမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ဆက်ဆံရေး၏စကားပြောသော, များစွာသောလုလင်တို့သည်လျော့နည်းတည်တံ့ကွန်နက်ရှင်ကိုဖန်တီးရန်ရရှိရန်၎င်းတို့၏အခက်အခဲကြောင့်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များနှင့်လိုအပ်သောလူ့ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏အလားအလာများကနူးညွတ်ဖြစ်လာရသည်။ ရလဒ်အဖြစ်လုလင်တို့သည်အခြားမည်သည့်လူဦးရေအချိုးအစားထက်ပိုညစ်ညမ်းစားသုံးကြသည်။ porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - porn စားသုံးမှုကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော PIED အဖြစ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်, နေသူများကဖန်တီးထားပါတယ်နိုင်အောင်လေ့ဖြစ်လာသည်။ "။ Porn ပေါ်မှသင့်ဦးနှောက်" porn အကဲခတ်, အချိန်ကျော်ဂယ်ရီ Wilson ကရေးသားသူသည်နှင့်အညီ, ဦးနှောက်ဓာတုဗေဒပြောင်းလဲအလွန်အကျွံ porn ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအရာအားလုံးထက်များအတွက် arousal ရှိရာအမှတ်ဖို့ဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံခံပြန်စီ - ပင်ကို real-ဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ - ဖြစ်လာ ပိုပြီးခက်ခဲ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ညစ်ညမ်း၏အလွန်အကျွံစားသုံးမှုရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးရေရှည်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းကောင်းစွာသုံးစွဲနိုင်၏ဖြေလျှော့မှုကြောင့်စစ်မှန်သောဘဝရင်ခုန်စရာသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများရှာကြံရာမှလူပျိုတို့တားဆီး, လိင်နှင့်နွေးထွေးမှု၏လက်တွေ့ကိုယ်စားပြုဖန်တီးလူသိများသည်။ ဒါဟာ porn အဖြစ်မှန်မအခြေခံရှိပြီးစစ်မှန်သောဘဝစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိခြင်းတက်သည်ဖြစ်စေအသုံးမပြုသင့်ကြောင်းအားလုံးလူပျိုတို့နှင့်လူကြီးများအားဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်။
လုလင်တို့သည်လည်းရင်ဆိုင်ရနောက်ထပ်ပြဿနာကြောင့်စီးပွားရေးထိခိုက်, ရင်ခုန်စရာချိတ်ဆက်မှုမရှိခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအောင်မြင်မှုမရှိခြင်းသူတို့ကိုန်းကျင်ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ disenfranchisement ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကလူပျိုတို့ကြောင့်ဆိုင်များတွင်သို့မဟုတ်ကျောင်းသို့မဟုတ်အလုပ်ပြင်ပလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏မရှိခြင်းအောင်မြင်သောသို့မဟုတ်အသုံးဝင်သောမခံစားရဘူး။ ဗီဒီယိုဂိမ်းဒီပျက်ပြယ်ဖြည့်ပါ - သူတို့ရည်မှန်းချက်နှင့်အောင်မြင်ခြင်းအခြေစိုက်ဖြစ်ကြသည်ကြောင့်ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ထဲမှာတူညီတဲ့အာရုံခံမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လက်တွေ့ဆုလာဘ်တစ်ခုအဓိပ္ပာယ်များကိုပေးစွမ်းပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသော setting ထဲမှာကစားသမားထားပါ။ လေ့လာရေးပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်အစွမ်းအစ၌တစ်ဦးတိုးကဗီဒီယိုဂိမ်းပုံမှန်ကစားနေကြသောအခါဖော်ပြပါ။ သို့သော်အောင်မြင်မှုအခြိနျဆှဲ၏ဤပုံစံအစစ်အမှန်ကမ္ဘာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစိတ်ပျက်သည်သေသော-အဆုံးထွက်ပေါက်ဖြစ်လာသကဲ့သို့ကောင်းစွာစွဲလမ်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်း၏ Over-စားသုံးမှုလိုပဲဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံခံ၏ပြန်စီစဉ် - ကစားသမားတစ်ဦးတည်းကစားအထူးသဖြင့်သောအခါ - အချိန်နှင့်အမျှတစ်ဦး "arousal" မှီခိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒီအလေ့အကျင့်လည်းဝေးအစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်ကျွမ်းကျင်မှု, ဝါသနာ, အပန်းဖြေဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ကောင်းသောအမှုကျင့်ဝတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲကနေအချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါ Over-စားသုံးမှုဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်အခြားမီဒီယာများ၏အပျက်သဘောနှစ်မျိုးစလုံးကိုလေ့လာခြင်းထိခိုကျနိုငျပေမယ့်, သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးများထက်ဝေး သာ. ကြီးမြတ်ပမာဏကစားသူကိုလူပျိုတို့, များအတွက်ထင်ရှားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာသည်။
တစ်ခုခုခဲဆွေးနွေးတင်ပြ Attention Deficit Disorder နဲ့ Attention Deficit Hyperactivity Disorder လုလင်တို့နှင့်ယောက်ျားလေးများအပေါ်ရှိသည်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားလေးများကလေးသည်စိတ်ရောဂါဗစ်တိုးရီးယား Dunckley သည်နှင့်အညီ, နှစ်ခုမှသုံးကြိမ်ကဤပုံမမှန်ရောဂါခံရဖို့ကပိုဖွယ်ရှိနှင့်ဆေးဝါးသတ်မှတ်ထားသောခံရဖို့ဝေးကပိုများပါတယ်။ အချို့သောဆေးဝါးများ - အဖြစ်အနည်းတစ်ဦးကဲ့သို့အခြားဟော်မုန်းခြယ်လှယ် - အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းမှဦးဆောင်ဇီဝကမ္မလူပျိုများအပျိုဖော်ဝင်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်, ကလေးမွေးဖွားလျော့နည်းသွား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆင်းရဲသောကြံ့ခိုင်ရေးလျော့နည်းသွားသည်။
လုလင်တို့သည်လည်းလူတွေယုံကြည်ထက်ယနေ့ထက်ပိုစိန်ခေါ်မှုများရင်ဆိုင်နေရသည်။ သူတို့က, အလုပ်ရှာဖွေတာအတွက်စိတ်မဖြစ်လာမယ့်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ရှာတဲ့မိသားစု စတင်. , သူတို့၏ကိလေသာနှင့်အသက်တာ၌အကျိုးစီးပွားထွက်ရှာကြသည်။ အဲဒီအစား, သူတို့အမျိုးသမီးများထက်လျော့နည်းပညာတတ်, ရောဂါ Over-, အာရုံဖြစ်လာနှင့်ထူးခြားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝကမ္မခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရပါပြီ။ ကျနော်တို့ကျန်းမာ, ကောင်းစွာ-rounded ယောက်ျားနဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍ၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုနှင့်လုလင်တို့၏ဤကလက်ရှိမျိုးဆက်က၎င်း၏ပုလ်၎င်း၏ Self-မှီခိုနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအားပြန်လည်ပေးရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုပြန်လည်ကူညီပေးဖို့ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လူပျိုတို့ရင်ဆိုင်ရလက်ရှိအခြေအနေသာသူတို့နေရာ, ဒါပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ကို၏ကျန်မှသာပိုပြီးထိခိုက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, နှင့်ပြင်ပေးဖို့သားစဉ်မြေးဆက်ယူနိုင်ဘူး။
အာရုံကြောဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာရှင် နှင့် ပြဿနာရှိသော ညစ်ညမ်း ဆေးခန်းသုံး ဆေးခန်း ပညာရှင် ဒေါက်တာ Mateusz Gola ၏ အဆိုအရ အဆိုပါ ပြဿနာများထဲတွင် အဖြစ်များဆုံး... t.co/z1luJpx4EJ